Apple mandefa ny kinova OS X El Capitan 10.11.5 | Avy amin'ny mac aho
Apple dia mamoaka ny kinova OS X El Capitan 10.11.5 vaovao
Nifoha androany tamin'ny angovo be i Apple ary nanolotra ny mpampiasa ilay kinova vaovao an'ny OS X El Capitan 10.11.5 rafitra fiasa izay azonao sintonina avy amin'ny Mac App Store, aorian'ny beta efatra mitovy amin'izany. Tsy ny fanavaozana ihany no navoaka ary ilay Apple Watch sy Apple TV dia efa misy ihany koa.
Araka ny efa fantatrao, Apple dia namoaka betas ho an'ity kinova vaovao an'ny OS X ity nandritra ny herinandro maro ary toa androany no andro voafidy hahazoana ny kinova farany hahatratra ny solosaintsika. Fantatrao sahady fa ny famoahan'ny Apple kinova an'ny rafitra dia tsy manala azy amin'ny mety tsy fahombiazany Ary io dia manomboka izao amin'ny fampiasana azy dia ho tsapantsika raha tena milamina izy na tsia.
Apple dia nanao ny kinova OS X 10.11.5 ho an'ny mpampiasa Mac rehetra. Ity dia vaovao farany izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny fitoniana sy ny fahombiazan'ny rafitra, mahatonga azy io ho lasa marin-toerana kokoa raha azo atao.
Zavatra iray azontsika lazaina fa niova dia ny iTunes 12.4 vaovao izay misy fanatsarana ny fitetezana ao. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana angon-drakitra misimisy momba ny fanovana bebe kokoa nampidirina tao amin'ilay kinova vaovao oS X 10.11. 5 toy ny amin'ny iTunes 12.4. Izahay dia efa misintona azy ireo hizaha toetra azy ireo ary hampahafantatra anao hatrany.
Tadidio fa raha miankina tanteraka amin'ny solosaina tokana ianao dia manoro hevitra anao izahay hiandry andro vitsivitsy alohan'ny hanavaozana ny rafitra mba hiasa amin'ny fiantohana. ary tsy mijaly very data very tsy azo sitranina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple dia mamoaka ny kinova OS X El Capitan 10.11.5 vaovao
Daniel FDGP dia hoy izy:
Hatramin'ny nandefasako ny fanavaozana 10.11.5, ny solosaina dia tsy mihidy tanteraka na mamerina amin'ny laoniny, manidy ny mahita izy ary tsy afaka manokatra ny lahatahiry aho fa ny fampiharana hafa, manampy ny sasany.
Valiny tamin'i Daniel FDGP
Abraham Olate dia hoy izy:
Olana iray ihany, manavao andro vitsy lasa izay ary tsy mihidy ny fampiharana sasany, na amin'ny fanidiana fanerena ... jereo ao amin'ny monitor ny hetsika ary tsy hiseho ireo fampiharana voasakana. Noheveriko fa mety ho olana amin'ny Java io, fa tsy nohavaozina fa tsia. Ny pro cut farany dia mihidy ary rehefa afaka ny vokany dia miteny amiko ny fanavaozana ny fanaraha-maso ny fampisehoana video, mitovy amin'ny Premier. Tsikaritro ihany koa fa ny rindranasa izay tsy mihidy amin'ny lafiny sasany dia misy ifandraisany amin'ilay horonantsary toy ny fandefasana lalao (battle net by blizzard) na ny panel java ary koa ny safari rehefa mampiasa efijery feno aho indraindray tsy mamaly ary efijery mainty fa mbola audio sy ny sisa. Izany rehetra izany dia nipoitra taorian'ny fanavaozana ny El Capitan kinova 10.11.5 (10.11.4 niasa lavorary ho ahy)
Valiny tamin'i Abraham Olate
Nick Beta dia hoy izy:
Manana olana mitovy amin'i Daniel FDGP aho ary niezaka nitady vahaolana, saingy mbola tsy nahita izany hatramin'izao.
Valiny tamin'i Nick Beta
hmestre0 dia hoy izy:
Nanana olana aho izay nanome ahy lesoka rehefa te hamafa fisie aho ary voavaha hatrany amin'ny sakana menu - Force exit - safidio Finder ary kitiho ny Restart.
Mamaly an'i hmestre0
Tsy ho feno izany ha
Alberto Bocanegra placeholder image dia hoy izy:
Tsy afaka mamono mac aho satria nohavaoziko tamin'ny kapiteny 10.11.5 ny bara farany ambany ary tsy hitako izay hatao. azafady HELPAAAA
Valiny tamin'i Alberto Bocanegra
Kherson dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko, tsy afaka namono ilay macbook aho hatramin'ny fanavaozana ho 10.11.5, ary koa ny fampiharana sasany dia tsy azo nakatona na miaraka amin'ny fanidiana an-tery, fanovana vaovao
Mamaly an'i Kherson
MontyPhoto dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko ao amin'ny IMAC, tsy mamela ahy hikatona, hanomboka indray, na hivoaka ... Nanomboka nanao ireo lesoka ireo aho taorian'ny nandehanako tamin'ny 10.11.4 ka hatramin'ny 10.11.5.
Ho antsika izay tsy maintsy miandry dia manome vahaolana aho mba hialana amin'ny famonoana ny bokotra aoriana, araho ireo dingana:
1.Todio amin'ny ankapobeny ny fametrahana ny anaranao sy ny teny miafinao.
2. Raha tokony hanome azy io hanakatona, hamerina na hivoaka indray dia omentsika REST.
3.Ao amin'ny efijery tsy miasa no omenay Mpampiasa FANOVANANA, hitondra anao any amin'io efijery io ianao.
4.Omeo anao eto ambany mpampiasa hanakatonana na hanombohana indray.
5. Handefa anarana sy teny miafina aminao izy hanidiana ny fotoanan'ny mpampiasa.
6.We manaiky azy izahay ary afaka mamono ny filaminana tanteraka izahay, fa ho haingana kokoa raha toa ka mandeha toy ny taloha ...
Mamaly an'i MontyPhoto
Graciela Benitez Lopez dia hoy izy:
Eny, nanao zavatra mitovy ihany koa aho mba hahafahana mamono azy, saingy avy eo nanomboka tamin'ny tsy fahombiazana hafa izy: tsy nahafantatra ilay monitor na ny toerana napetrany, toy ny hoe nifandray VGA generika aho. Miverina amin'ny 10.11.4 aho
Valiny tamin'i Graciela Benitez Lopez
Tomoki dia hoy izy:
Misy fomba fiverenana mankany amin'ny 10.11.4? ny kinova vaovao dia miteraka olana amiko
Mamaly an'i Tomoki
Masinina! Io no tsara indrindra, alohan'ny fanavaozana dia torohevitra foana ny hanao kopia backup.
Salama daholo, tiako ho fantatra raha ilaina ny manova ny El Capitan, raha mendrika izany, manana ny Leopard aho, ary manana olana izay tsy mamela ahy hampiasa ny photoshop-ko. Ankasitrahako ny fanampianao !!!!!! Thankssssss
Walter Gomez Urrego dia hoy izy:
Salama tsara, zavatra mitovy no mahazo ahy, nianjera ilay nahita. hatramin'ny fanavaozana ny kinova 10,11.5. Ilay imac dia tsy maintsy nandoa teknisiana aho mba hamerenako ny kapiteny tamin'ny kinova taloha, ary simba ny laptop-ko. iza no afaka manampy antsika amin'izany. Misaotra anao ….
Valiny tamin'i Walter Gomez Urrego
Mitovy tanteraka amiko ny mitranga amin'ny imac, tsy vonoina izy io ary somary miadana ihany, manampy!
Mitovy tanteraka izany !!! Niezaka ny zava-drehetra aho: apetaho amin'ny tanana, apetraka indray, TSY MISY. ny afisy System (toy ny fanakatonana) dia amin'ny teny anglisy. Vahaolana: niverina tany amin'ny OS X 10.11.4 aho noho ny Time Machine.
Hitako fa tsy irery aho! Izaho dia manana io olana io ihany. Andro vitsy lasa izay dia niantso ny serivisy teknika an'ny Apple aho ary nilaza tamiko izy ireo fa io no fotoana voalohany nitaterana olana tamin'ny OS x 1, hafahafa sa tsy izany?
Nitranga tamiko ilay fanavaozana mitovy amin'ny 10.11.5 ary nanomboka teo rehefa novonoiko ny Macbook Air dia ny Dock ihany no sisa tavela fa tsy maty ary tsy maintsy hamono azy amin'ny bokotra iray aho, nitady info momba ny fomba amboary ity olana ity ary tsy nanandrana ny zava-drehetra aho, fa ny hitako dia olana amin'ny fanavaozana ny rafitra izany izao, avelako ho tsy miasa fotsiny miaraka amin'ny efijery mihidy miandry an'i Apple hamoaka fanavaozana vaovao, nanomboka nieritreritra mihitsy aza aho momba ny fametrahana fametrahana madio, ny zavatra manitikitika indrindra dia ny fananako Macbook Pro hatramin'ny tapaky ny taona 2012 ary tsy nanome ahy olana izay namboarina ihany koa ho 10.11.5, ahoana ny amin'ny Apple ireo zavatra ireo izay tsy dia fahita loatra?
Miditra amin'ny vondrona tsy afaka nakatona ny solosaina aho! Ahoana no hahafantarana azy ireo? Te-hanavao izao aho!
Alejandro Latorre Chirot dia hoy izy:
Ny Mac Pro ahy dia tsy te-hanavao ny kinova 10.11.5
Valiny tamin'i Alejandro Latorre Chirot
patogonzalezsalamanca dia hoy izy:
Salama, izaho manana olana mitovy amin'ny fanidiana !!!!
Mamaly an'i patogonzalezsalamanca
Salama, izaho manana an'io olana io ihany. Misy vahaolana ve?
Valiny amin'i FELIPE
Nedy navarro dia hoy izy:
Salama!! Toy izany koa no mitranga amiko hatramin'ny fanavaozam-baovao !! Nahita vahaolana ve ianao? Miarahaba!
Valiny tamin'i Nedy Navarro
Mihodina sy maty ny monitor ahy miaraka amin'ny fanavaozana 10.11.16
Cecilia dia hoy izy:
Salama manana olana mitovy amin'izany aho, manahy aho sao ho simba ny kapila mafy, azafady mba misy manana hevitra hanamboarana azy, misaotra.
Valiny amin'i Cecilia
Salama, roa andro lasa izay dia nanavao ny El Capitan 10.11.5 aho ary manana olana mitovy amin'ny fanidiana, tsy nahita ny vahaolana ... misy mahalala ve izay azo atao? Misaotra anao
ITunes vaovao 12.4 Inona no vaovao amin'ity kinova vaovao ity?
Ilay resadresaka very nataon'i Steve Jobs, efa tao amin'ny Netflix